Voninahitra 3C Review | Androidsis
Ny voninahitra dia fofonaina madio ho an'ny tsena. Huawei dia naniry marika iray mifantoka amin'ny tsena eoropeanina ary namela tsiro be teo am-bavantsika ireo fitaovana vaovaony vaovao rehefa nanararaotra nanandrana azy izahay. Izahay dia mitondra anao a Voninahitra 3C, terminal eo anelanelany misy vidiny manintona: 139 euro.
Raha mijery ny toetra ara-teknikan'ny Honor 3C dia mazava fa nahavita asa tsara tamin'ny alàlan'ity finday ity ry zalahy avy amin'ny Honor. Na dia misy lehibe aza fa: ny dikanteny ampiasainy dia Android 4.2.2. Na dia marina aza fa ny kinova sinoa dia efa novaina ho KitKat ary ho tonga tsy ho ela ny fanavaozana ny Honor 3C, dia iray amin'ireo tsena lehibe amin'ny terminal izay raha ny sandan'ny vola no jerena, heveriko fa iray amin'ireo telefaona antonony tsara indrindra eny an-tsena.
1 Toetra ara-teknikan'ny Honor 3C
Toetra ara-teknikan'ny Honor 3C
lanja Gramin'ny 140
efijery IPS 5 santimetatra
vahaolana 1280 x 720 pika
processeur MediaTek MT6582 Quad Core 1.3GHz
Mpikirakira sary Mali 400
Fahatsiarovana anaty 8 GB azo esorina amin'ny alàlan'ny microSD ka hatramin'ny 64 GB
Malagasy Bible Android 4.2.2
fakan-tsary Eo aloha: 5 MP / aoriana: 8 MP misy flash LED f / 2.0
bateria Batterie Li-Ion 2.300 mAh azo esorina
Conectividad DualSIM; GPS; Bluetooth 4.0; Radio FM; HSPA +
Araka ny efa hitanao, ny iray amin'ireo tanjaky ny Honor 3C dia ny Fahatsiarovana RAM 2 GB izay mitambatra, miavaka amin'ny mpifaninana aminy izay mazàna manana gig. Raha ny momba ilay mpikambana vaovao ao amin'ny Honor, ny bandy ao Huawei dia nisafidy MediaTek SoC 4-core izay tsy manana fialonana amin'ny Snapdragon 400, ilay mpifaninana mivantana aminy.
La Efijery IPS 5 santimetatra Ny Honor 3C dia manana kalitao tsara, na dia zatra mampiasa terminal ianao miaraka amin'ny efijery Full HD dia ho hitanao ny fahasamihafana eo amin'ny kalitao. Ny tsy fahombiazana lehibe an'ity finday ity dia miaraka amin'ny Android 4.2 JB, na dia avy amin'ny Honor aza dia nampanantena anay izy ireo fa na ho ela na ho haingana dia havaozin'izy ireo amin'ny Android 4.4 KitKat ity terminal ity.
Ary Lollipop? Hatramin'izao dia tsy fantatray hoe oviana izy ireo no hanavao ity terminal ity amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Google, na dia efa misy vitsivitsy aza ROM izay mampiseho fa ny Honor 3C dia manohana ny Android 5.0 tsy misy olana.
Ny famolavolana Honor 3C dia tsotra nefa mandeha, noho ny tsipika mahitsy sy ny sisiny miolakolaka. Ny vatany dia vita amin'ny plastika na dia izany aza mahafinaritra ny mikasika ary tsy mahatsiaro mora vaky rehefa ampiasaina.
Ao amin'ny eo alohanay dia mahita ny fampandrenesana LED, ankoatry ny bokotra telo tsy hazavana ambany sy mpandahateny eo an-tampon'ny fitaovana. Na eo aza ny finday avo lenta 5-inch, ny habeny dia tsy marina ary, miaraka amin'ny lanjan'ny 140 grama an'ny terminal, ataovy finday ahazoana aina sy mora ampiasaina ny Honor 3C.
Eo amin'ny sisiny ankavanana dia hitantsika ny fifehezana ny feony sy ny bokotra herinaratra ao amin'ny finday avo lenta, izay mahazo aina tokoa amin'ny alàlan'ny tanana iray. Ankoatra ny 3.5 jack dia eo an-tampon'ny Honor 3C.
Asongadino ny bateria azo esorina, izay aorian'ny fanesorana azy dia hitantsika ny slot indroa ho an'ny karatra SIM micro, ho fanampin'ny lovia ho an'ny karatra fahatsiarovana microSD hatramin'ny 64 GB.
Ny efijery Honor 3C dia misy a Tontonana IPS 5 inch Mahatratra ny vahaolana 1280 x 720 teboka, mahatratra ny hakitroky 294ppp, mihoatra ny ampy ho an'ny terminal midadasika. Na dia ho hitanao aza ny tsy fitovizany raha zatra amin'ny efijery Full HD ianao, raha raisina ny vidiny, dia mihoatra ny fanatanterahana ny asany io. Ankasitrahanao ihany koa ny fizakantena natolotry ny Honor 3C.
Ny antsipiriany tena mahaliana dia ilay mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Honor mamela anao hanitsy ny famirapiratana sy ny mari-pana loko araky ny tsirinay. Toy ny mahazatra ao amin'ny tontonana IPS, tena mazava ny lokony, na dia misy lehibe aza: ny Honor 3C dia tsy manana teknolojia toa ny vahaolana Gorilla Glass izay miaro ny efijery amin'ny rangotra mety hitranga, ka eny na eny tokony hametrahana mpiaro eo amboniny. an'ny efijery. Safidy iray tokony hodinihina ny Fiarovana PanzerGlass.
Fitaovana tena mahaliana izay napetrak'izy ireo tao amin'ny Honor 3C no mety hitranga ampandehano ny efijery amin'ny paompy indroa, tena amin'ny fomban'ny KnockON nataon'i LG, ankoatry ny maody fonon-tànana izay hankafizin'ny olona mangatsiaka indrindra.
Raha fintinina, ary raha raisina ny fari-tany manodidina azy dia manatanteraka tanteraka ny asany ny efijery Honor 3C.
Ny filokana dia miloka amin'ny a MediaTek MT6582 1.3 GHz quad-core ho an'ny Honor 3C. Misongadina ny fahatsiarovany RAM 2 GB, mahatonga an'ity telefaona midadasika ity ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra eny an-tsena.
Ny angona AnTuTu dia manambara valiny mitovy amin'ny terminal misy RAM 1 GB, na dia tsy isa aza ny zava-drehetra. Porofon'izany ny zava-misy afaka nilalao Modern Combat 5 tsy nisy olana. Zavatra tsy nampoiziko tamina terminal antonony.
ny asa fanatsarana tsara avy amin'ny Honor, terminal sarotra resena noho ny vidiny manintona.
Izany dia iray amin'ireo lafiny amin'ny Honor 3C izay nahagaga anay indrindra. Ny batterie 2.300 XNUMX mAh dia tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ny lanjan'ny fitaovana rehetra amin'ity fitaovana ity. Ary mihoatra ny fanatanterahana ny iraka ampanaovina azy.
Ny batterie dia mampiseho fihetsika tena tsara azo avy amin'ny eo ho eo amin'ny 35 - 40 ora fizakan-tena amin'ny fampiasana antonony ary nihoatra ny 5 ora ny efijery. Isa marobe izay mamela ny farany ambony dia ratsy be. Asa fanatsarana tsara avy amin'ny Honor. Azoko antoka ianao fa ny bateria Honor 3C dia hahagaga anao.
Na dia ny bateria Honor 3C aza Tsy manana karazana rafitra famahana haingana, afaka adiny roa dia ho voampanga feno ny telefaona. Ary koa eo amin'ny sehatry ny fitaovana dia misy safidy fitahirizana bateria misy safidy telo: ara-dalàna, marani-tsaina ary mitahiry izay ahafahantsika manatsara kokoa ny faharetany.
Ao ambadik'ilay Honor 3C isika dia mahita a Sony BSI CMOS sensor miaraka 8 megapixels, miampy flash LED. Ny valiny amin'ny ankapobeny dia tena tsara, tamin'ny fijerena ireo fetran'ny fitaovana ao anaty terminal midadasika miaraka amin'ny vidiny mirary.
Amin'ny toe-jiro mety tsara ny valiny dia nihoatra ny nahagaga, na dia any amin'ny tontolo tsy dia mirehitra loatra aza dia misy tabataba hita eo amin'ny sary, na dia hampiala anao amin'ny olana mihoatra ny iray aza izany. Zavatra antenaina ao amin'ny terminal eo afovoany.
Ny fifantohana sy ny fakana sary dia haingana, ankoatry ny fananana safidy isan-karazany toy ny maody Smart, Beautify na HDR. Ny voninahitra 3C Izy io dia afaka mirakitra horonantsary amin'ny kalitaon'ny FullHD ary mampifandray ny fanamafisana ny sary.
Ny fakan-tsary voalohany koa dia nahagaga anay raha ny kalitao sy ny safidiny no jerena. Ny megapixels 5 dia manolotra fampisehoana tena tsara, mety tsara amin'ny antso an-tsary na ny sarin'ny tena, ankoatry ny fananana a fitaovana ho antsika hivoaka hijery mivantana ny fakantsary fa tsy amin'ny efijery fitaovana.
Ity no faritra tena tsy ampy ny Honor 3C. Izaho manokana dia tena tiako ilay sosona manokana Emotion UI 2.0, interface tsotra sy intuitive. Tsy hanana ny menio mahazatra itehirizana ny rindranasa izahay, saingy hapetraka amin'ny takelaka samihafa izy rehetra.
Ary koa ny Honor 3C dia feno safidy manokana, toy ny fahafaha-mampiasa ny terminal amin'ny tanana iray na ny safidy fametrahana lohahevitra samihafa amin'ny fomba samihafa. Izy io koa dia miaraka amina fampiharana ampiharina marobe, toy ny serivisy fitehirizana ao amin'ny lalao Bitcasa, Kingsoft Office ary lalao Gameloft sasany.
Ratsy loatra ny Honor 3C manaraka fmitambatra amin'ny Android 4.2.2, bebe kokoa raha raisinay fa ny ny zandry kely dia efa nahazo Android 4.4.
El Honor 3C dia namela tsiro lehibe teo am-bavantsika. Tsy hahita finday misy RAM 2 GB ianao latsaky ny 150 euro ary, mahita ny fampisehoana natolotry ny Honor 3C sy ny vidiny, izay manodidina ny 139 euro, dia toa iray amin'ireo safidy tsara indrindra amiko io, raha tsy ny tsara indrindra eny eny. Mitady terminal termy midadasika sy mahery ianao ary tsy maninona izany raha tsy manana ny kinova farany an'ny rafitry ny Google.
Ny fakantsary ataon'izy ireo dia manolotra fampisehoana mahavariana
Ny bateria dia manolotra fahaleovan-tena mandritra ny 40 ora amin'ny fampiasana antonony
Ny endri-javatra tsara indrindra eny an-tsena ho an'ny terminal midadasika latsaky ny 150 euro
Ny efijery dia tsy manana karazana fiarovana ka ilaina ny mampiasa fiarovana amin'ny efijery
Miasa amin'ny Android 4.2.2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Manomeza voninahitra ny fandinihana 3C, izany no fiheveranay
Salama, voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny famakafakana, azo sary. Raha mahazo alalana dia apetrako ny fanontaniako: tsy haiko na hividy ny voninahitra 3c na i Holly, ny 3c dia € 140, ny Holly € 120. Mendrika handoa € 20 bebe kokoa ve ny 3c? mamerina ny fisaorana anao
Faly aho fa tianao ilay famakafakana. Lazaiko aminao, izaho dia mamakafaka an'i Honor Holly amin'izao fotoana izao ary afaka milaza aminao aho fa, na dia finday tsara aza aho, noho ny fahasamihafana 20 euro dia natsipiko tsy nisy fisalasalana ny Honor 3C fa io gig RAM io dia tena tsikaritra.
Misaotra betsaka amin'ny torohevitra! Ary ankehitriny, hofehezina ny curl, ary azafady raha somary mavesatra aho, eo anelanelan'ny voninahitra 3c sy ​​ny xiaomi redmi 2? Io no nahatonga ahy ho ranomasina fisalasalana ... misaotra betsaka indray.
Eo ianao no manome ahy izay maharary ahy satria afaka nanandrana ny Xiaomi Redmi 2 aho ary tiako be koa izany. Fa ny 3C dia mitohy mahazo tombony amin'ny RAM, raha tsy mandeha amin'ny 2 GB Redmi 2 ianao izay efa tafakatra hatramin'ny 180 euro ary ambonin'izany rehetra izany dia manana antoka eto amin'ny firenentsika ka handray ny Honor 3C aho.
Misaotra betsaka indray, tena. Mandehana mankalaza ny 3c avy eo; salama!
[APK] Sintomy ny WhatsApp kinova 2.12.45 alohan'ny olon-kafa miaraka amina backup any Drive
Corridor Z, manome fihodinana ny mpihazakazaka sy ny zombie